myatnoe April 5, 2008 at 6:24 AM
လူတွေမှာ.... ????? အဖြေမသေချာဘူးးး
မြတ်နိုး ခပ်ငယ်ငယ်က ကာတွန်းထဲမှာဖတ်ဘူးတယ် သခင်ပြန်အလာကို အသေခံပီးမျှော်သွားတဲ့ ခွေးကလေး အကြောင်း မြတ်နိုးဒီရောက်တော့ အဲဒီနေရာလေးရောက်သွားခဲ့တယ် အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့တယ်. သစ္စာရှိတဲ့ ခွေးလေးတွေအကြောင်း ဖတ်ရရင် သိပ်ကြည်နူးတာပဲနော်။ ကိုယ်တိုင်လဲ သူတို့လို အတုယူပီး လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေဆဲပါ။ ဟဲဟဲ
ကိုယ့်အပေါ်တကယ် ကောင်းသူဆိုရင်.. အသေအချာပြန်ကောင်းဘူးပါတယ်။ ဆိုးတယ်ဆိုရင်လဲ အသေအချာ ပြန်ဆိုးဘူးပါတယ်။ ဟီး။
တန်ခူး April 7, 2008 at 8:49 AM
ရင်ကိုထိရှသွားတဲ့ ပုံကလေးတွေပါ။ သံယောဇဉ်တွေနဲ့၊ မေတ္တာတရားတွေက လူတွေမှာ တဖြေးဖြေးပါးလျလာတာ စဉ်းစားစရာပဲသက်ဝေရယ်။
ယုန်ကလေး April 7, 2008 at 2:36 PM
ဒီပုံတွေကို ကြည့်ရလို့ ရင်ထဲတောင်မကောင်းပါဘူး တိရိစာန်တောင်မှ အသိညဏ်ရှိသေးတယ် တချိုသော လူတွေက ခွေးလောက်တောင်အသိညဏ်မရှိဘူးနော်
မောင်မျိုး April 11, 2008 at 5:30 PM
ဒီပုံလေးကြည့်ပြီး ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့ မေတ္တာတရားကို ထပ်တူးခံစားသွားပါတယ် အစ်မ ရေ့ သံယောဇဉ်ဆိုတာက ရေချမ်းစင်လေးပေါ့ ထာဝရ အေးချမ်းနေတယ် သူ က အချစ်ထက်တောင် ပိုခိုင်မြဲတယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်တယ် မျှဝေတာ ကျေးဇူးဗျး)။
သက်ဝေ April 25, 2008 at 1:47 PM
ကိုယ် ခံစားရသလို ထပ်တူခံစားပေးကြတဲ့ မြတ်နိုး၊ တန်ခူး၊ ယုန်ကလေး နဲ့ မောင်မျိုး တို့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။